သမီးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့အခါ အမှားတှေ မဖွဈစဖေို့ ဖဖေတေို့အတှကျ Rules (၉)ခု - Chit MayMay
Home Child Care သမီးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့အခါ အမှားတှေ မဖွဈစဖေို့ ဖဖေတေို့အတှကျ Rules (၉)ခု
သမီးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့အခါ အမှားတှေ မဖွဈစဖေို့ ဖဖေတေို့အတှကျ Rules (၉)ခု
ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့နရောမှာ မမေတေို့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကပဲ အဓိကကတြာမဟုတျပါဘူးနျော။ ဖခငျတှရေဲ့ ပွုစုပြိုးထောငျမှုလညျး လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးက လေးစားအားကနြရေတဲ့ ဖခငျတဈယောကျထကျ ကွညျနူးစရာကောငျးတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ သမီးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျပေးတဲ့ ဖခငျဆိုတာ ရှားပါတယျ။ ဒါက ဖခငျတှမှော ဘယျကစပွီး ဘယျလိုပွုစုပြိုးထောငျရမယျဆိုတဲ့ အိုငျဒီယာ မရှိတာကွောငျ့လညျး သမီးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့နရောမှာ စိတျဝငျစားမှု နညျးကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ငယျရှယျသော မိဘတှအေတှကျ မဂ်ဂဇငျးဆောငျးပါးတဈခုမှာ ဖျောပွထားတဲ့ သမီးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့အခါ ထိရောကျသော စညျးမဉျြးတဈခြို့ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဖခငျတှမှော စူပါမိဘတဈယောကျဖွဈလာဖို့ ဘယျလိုလိုကျနာရမယျဆိုတဲ့ လမျးညှနျတဈခုရှိလြှငျ ဖခငျတှဟော သမီးတှကေို ပွုစုပြိုးထောငျခွငျးရဲ့ ကွီးမားသောအလုပျတဈခုကို လုပျနိုငျမယျဆိုတာ လုံးဝသခြောပါတယျ။
၁။ ကိုယျတိုငျ ပနျးကနျဆေးပွပါ
ယောကျကြားတဈယောကျအနနေဲ့ ခကျြပွုတျတာ၊ ကွမျးတိုကျတာ၊ အဝတျလြှျောတာစတဲ့ ဒီအရာတှအေားလုံးကို လုပျနိုငျကွောငျး သမီးလေး မွငျလာနိုငျပါတယျ။ သမီးတှမှော ငါ့ဖဖေကေ ဘကျစုံတျောတယျ။ အကုနျလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ ဂုဏျယူတဲ့စိတျ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဂိမျးကစားတဲ့အခါလညျး အတူတူပါပဲ။ သမီးလေး အိုးခှကျတှေ၊ အရုပျတှနေဲ့ ကစားနတေဲ့အခါ ဖခငျတှအေနနေဲ့ လိုကျကစားပေးဖို့ မရှကျပါနဲ့။ သငျ့ကလေးရဲ့ ပြျောရှငျမှုက ပုံသကေားကြ သတျမှတျခကျြတှထေကျ ပိုပွီး အရေးကွီးပါတယျ။
၂။ သမီးနှငျ့အတူ အခြိနျဖွုနျးပေးပါ
ဒါကတော့ သမီးကို ခဈြကွောငျးဖျောပွခငျြတဲ့ ဖဖေတေို့အတှကျ အကွံဉာဏျကောငျးတဈခြို့ပါ။ လူလားမမွောကျသေးတဲ့ အရှယျကနေ စတငျနိုငျပါတယျ။ အနှီးလဲပေးတာ၊ သူမကိုခြီပိုးတာ၊ သူမနှငျ့အတူ လမျးလြှောကျတာ။ သူမနှငျ့အတူ ကစားပေးတာတို့ ဖွဈပါတယျ။
၃။ သူမမေးခှနျးတှကေို ဖွပေေးပါ
“မမေကေို့ မေးလိုကျလေ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မထေ့ားပါ။ ဖခငျတဈယောကျက သမီးမေးလာမယျ့ မေးခှနျးတှကေို ဖွသေငျ့ပါတယျ။ သငျမဖွနေိုငျတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးနိုငျသလား? တဈခုခုမေးလို့ သငျမဖွနေိုငျဘူးဆိုရငျ သမီးနှငျ့အတူတူ အဖွကေို ရှာတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၄။ ကလေးတာဝနျတှကေို ခှဲဝယေူပေးပါ
ဖခငျတဈယောကျရဲ့တာဝနျက ပိုကျဆံရှာပေးယုံနဲ့ လငျ့ဝတ်တရား၊ ဖခငျဝတ်တရား ကပြွေီလို့ သတျမှတျလို့ မရပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားပေးတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ မိခငျတဈယောကျဖွဈဖို့ ဘာတှေ လိုအပျသလဲဆိုတာ တဈနထေဲ့နဲ့ အရာအားလုံးကို မလလေ့ာနိုငျပါဘူး။ ဖခငျတှလေညျး လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျနျော။ သမီးလေး ဂြီကတြဲ့အခါ ခြီပိုးပေးဖို့၊ အနှီးလဲပေးဖို့ အခှငျ့အရေးကို ဖခငျတှေ လကျလှတျမခံသငျ့ပါဘူး။
၅။ သူတို့မှာရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ ပွောပွပေးပါ
ကလေးဘဝမှာတညျးက သူတို့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးရဲ့ အမညျတှကေို သိတဲ့ကလေးဟာ တဈခုခုဖွဈလို့ ဆရာဝနျနှငျ့သှားပွတဲ့အခါ သမီးရဲ့ ဘယျနရောက ဘာဖွဈတယျဆိုတာ ရှကျကိုးရှကျကနျးမဖွဈဘဲ ပွောဆိုနိုငျတယျလို့ လလေ့ာမှုမြားက ဖျောပွထားပါတယျ။
နိုငျငံတကာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုနှငျ့ ကာကှယျရေးစငျတာ (NSVRC)ရဲ့ အဆိုအရ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးအတှကျ မှနျကနျတဲ့ အသုံးအနှုနျးမြားကို အသုံးပွုခွငျးက မိဘတှနှေငျ့ စကားပွောတဲ့အခါ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုနိုငျခွငျး၊ သူတို့ခန်ဓာကိုယျကို ကောငျးစှာ နားလညျ၊ လကျခံနိုငျခွငျးတို့ကို ကူညီပေးပွီး child abuse ကနေ ကာကှယျပေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၅။ သမီးကို ဘောလုံးကစားဖို့ သငျပေးနိုငျပါတယျ
သားယောကျြားလေးမှ မဟုတျပါဘူး။ သမီးမိနျးကလေးကိုလညျး ဘိုးလငျးပဈကစားနညျး၊ ဘောလုံးကစားနညျးတှေ သငျပေးလို့ရပါတယျ။ သူမမှာ တခွားမိနျးကလေးတှထေကျ အားသာခကျြတဈခုရှိတယျဆိုရငျ သူမအတှကျ ဂုဏျယူမှုကို ခံစားမိစနေိုငျပါတယျ။
၆။ ဇနီးသညျက အကူအညီတောငျးတဲ့အထိ မစောငျ့ပါနဲ့
ငယျရှယျတဲ့မိခငျတှဟော သူတို့မှာ ကလေးတဈဖကျ၊ အိမျအလုပျတဈဖကျနဲ့ ဗြာမြားနပေမေယျ့ နညျးမှနျလမျးမှနျဖွငျ့ အကူအညီ ဘယျလိုတောငျးရမလဲဆိုတာ နားမလညျပါဘူး။ တခါတရံမှာ သူတို့အကူအညီလိုနတောတောငျ နားမလညျကွပါဘူး။ ယောကျြားကလညျး ဒါတှကေ မိနျးမကိစ်စတှပေဲ မိနျးမလုပျလိမျ့မယျဆိုပွီး ဝငျမကူညီတတျကွပါဘူး။ ဒီအခိုကျအတနျ့ဟာ ခငျပှနျးသညျ ကူညီပေးရမယျ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ မိနျးမ ငါလုပျပေးနိုငျတာ ဘာရှိသလဲဆိုပွီးမမေးပါနဲ့။ ကလေးတှကေို ထိနျးပေးပွီး သငျ့ဇနီးကို ရခြေိုးခြိနျပေးပါ။ အေးအေးဆေးဆေး ထမငျးစားလို့ရမယျ့ အခြိနျပေးပါ။
၇။ သားသမီးတှကေို ခဈြကွောငျးဖျောပွဖို့ မရှကျပါနဲ့
ဖခငျတိုငျးလိုလိုက သမီးတှကေို ခဈြကွပမေယျ့ ခဈြကွောငျး မဖျောပွတတျကွပါဘူး။ မိခငျလောကျ ရငျးနှီးတဲ့ ဆကျဆံရေးမရှိကွတာကွောငျ့ အရှယျရောကျတဲ့အထိ ခပျတနျးတနျးပဲ ဖွဈသှားကွပါတယျ၊ မိခငျထကျ ဖခငျကို ပိုကွောကျရတာလညျး ပါပါတယျ။ ဒီကွောငျ့ ဖခငျတှဟော အသကျအရှယျရလာတဲ့အခါ သားသမီးရဲ့မတ်ေတာနဲ့ နှေးထှေးမှုကို မိခငျလောကျ မခံစားရတာ ဖွဈပါတယျ။ ခံစားခကျြတှကေို ဖျောပွခွငျးက စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
၈။ သမီးကို ခြီပိုးပါ
သမီးက အရမျးငယျသေးရငျ ကြောပိုးထားရတာမြိုး၊ သိုငျးကွိုးတဈခုထဲထညျ့ပွီး ခြီပိုးသှားရတာမြိုးကို မရှကျပါနဲ့။ ကြှမျးကငျြသူမြားက ဒီနညျးလမျးဟာ ဖခငျတဈယောကျနဲ့ ကလေးတဈယောကျအကွား ဆကျသှယျမှုကို ပိုမိုအားကောငျးစကွေောငျး သကျသပွေခဲ့ပါတယျ။
၉။ သငျ့ရဲ့ခဈြခွငျးကို လကျတှပွေ့သပါ
ဖခငျတှကေို သားသမီးတှကေ လူစှမျးကောငျးအဖွဈ သတျမှတျထားကွပါတယျ၊ သူတို့လေးတှေ ပိုအားကိုးတဲ့သူက သူတို့ဖခငျ ဖွဈလို့ပါ။ ဖခငျရဲ့စောငျ့ရှောကျမှုအကှာအဝေးက အမြားကွီး ကယျြပွနျ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့လေးတှေ ကာကှယျဆေးသှားထိုးတဲ့အခါ လိုကျပါပေးသလို ၊ စတိုးဆိုငျမှာ အရုပျလေးတှေ ရှေးခယျြပေးတာ၊ ပူနတေဲ့အစားအစာကို အေးအောငျမှုတျပေးတာ စသဖွငျ့ ဖခငျတဈယောကျရဲ့ ခဈြခွငျးကို ပါးစပျကထုတျမပွောဘဲ လကျတှပွေ့သနိုငျပါတယျ၊
သမီးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ အမှားတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဖေဖေတို့အတွက် Rules (၉)ခု
ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နေရာမှာ မေမေတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကပဲ အဓိကကျတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဖခင်တွေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးက လေးစားအားကျနေရတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ထက် ကြည်နူးစရာကောင်းတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် သမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ ဖခင်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ဒါက ဖခင်တွေမှာ ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ မရှိတာကြောင့်လည်း သမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နေရာမှာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်ရွယ်သော မိဘတွေအတွက် မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ ထိရောက်သော စည်းမျဉ်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဖခင်တွေမှာ စူပါမိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်တစ်ခုရှိလျှင် ဖခင်တွေဟာ သမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းရဲ့ ကြီးမားသောအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ လုံးဝသေချာပါတယ်။
၁။ ကိုယ်တိုင် ပန်းကန်ဆေးပြပါ
ယောက်ကျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ချက်ပြုတ်တာ၊ ကြမ်းတိုက်တာ၊ အဝတ်လျှော်တာစတဲ့ ဒီအရာတွေအားလုံးကို လုပ်နိုင်ကြောင်း သမီးလေး မြင်လာနိုင်ပါတယ်။ သမီးတွေမှာ ငါ့ဖေဖေက ဘက်စုံတော်တယ်။ အကုန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါလည်း အတူတူပါပဲ။ သမီးလေး အိုးခွက်တွေ၊ အရုပ်တွေနဲ့ ကစားနေတဲ့အခါ ဖခင်တွေအနေနဲ့ လိုက်ကစားပေးဖို့ မရှက်ပါနဲ့။ သင့်ကလေးရဲ့ ပျော်ရွင်မှုက ပုံသေကားကျ သတ်မှတ်ချက်တွေထက် ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ သမီးနှင့်အတူ အချိန်ဖြုန်းပေးပါ
ဒါကတော့ သမီးကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြချင်တဲ့ ဖေဖေတို့အတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ချို့ပါ။ လူလားမမြောက်သေးတဲ့ အရွယ်ကနေ စတင်နိုင်ပါတယ်။ အနှီးလဲပေးတာ၊ သူမကိုချီပိုးတာ၊ သူမနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်တာ။ သူမနှင့်အတူ ကစားပေးတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သူမမေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးပါ
“မေမေ့ကို မေးလိုက်လေ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မေ့ထားပါ။ ဖခင်တစ်ယောက်က သမီးမေးလာမယ့် မေးခွန်းတွေကို ဖြေသင့်ပါတယ်။ သင်မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနိုင်သလား? တစ်ခုခုမေးလို့ သင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် သမီးနှင့်အတူတူ အဖြေကို ရှာတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၄။ ကလေးတာဝန်တွေကို ခွဲဝေယူပေးပါ
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်က ပိုက်ဆံရှာပေးယုံနဲ့ လင့်ဝတ္တရား၊ ဖခင်ဝတ္တရား ကျေပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲဆိုတာ တစ်နေ့ထဲနဲ့ အရာအားလုံးကို မလေ့လာနိုင်ပါဘူး။ ဖခင်တွေလည်း လေ့လာထားသင့်ပါတယ်နော်။ သမီးလေး ဂျီကျတဲ့အခါ ချီပိုးပေးဖို့၊ အနှီးလဲပေးဖို့ အခွင့်အရေးကို ဖခင်တွေ လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။
၅။ သူတို့မှာရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ
ကလေးဘဝမှာတည်းက သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းရဲ့ အမည်တွေကို သိတဲ့ကလေးဟာ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ ဆရာဝန်နှင့်သွားပြတဲ့အခါ သမီးရဲ့ ဘယ်နေရာက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းမဖြစ်ဘဲ ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ (NSVRC)ရဲ့ အဆိုအရ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြုခြင်းက မိဘတွေနှင့် စကားပြောတဲ့အခါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းစွာ နားလည်၊ လက်ခံနိုင်ခြင်းတို့ကို ကူညီပေးပြီး child abuse ကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၅။ သမီးကို ဘောလုံးကစားဖို့ သင်ပေးနိုင်ပါတယ်
သားယောကျာ်းလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သမီးမိန်းကလေးကိုလည်း ဘိုးလင်းပစ်ကစားနည်း၊ ဘောလုံးကစားနည်းတွေ သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ သူမမှာ တခြားမိန်းကလေးတွေထက် အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် သူမအတွက် ဂုဏ်ယူမှုကို ခံစားမိစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဇနီးသည်က အကူအညီတောင်းတဲ့အထိ မစောင့်ပါနဲ့
ငယ်ရွယ်တဲ့မိခင်တွေဟာ သူတို့မှာ ကလေးတစ်ဖက်၊ အိမ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဗျာများနေပေမယ့် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် အကူအညီ ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာ နားမလည်ပါဘူး။ တခါတရံမှာ သူတို့အကူအညီလိုနေတာတောင် နားမလည်ကြပါဘူး။ ယောက်ျားကလည်း ဒါတွေက မိန်းမကိစ္စတွေပဲ မိန်းမလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဝင်မကူညီတတ်ကြပါဘူး။ ဒီအခိုက်အတန့်ဟာ ခင်ပွန်းသည် ကူညီပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမ ငါလုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာရှိသလဲဆိုပြီးမမေးပါနဲ့။ ကလေးတွေကို ထိန်းပေးပြီး သင့်ဇနီးကို ရေချိုးချိန်ပေးပါ။ အေးအေးဆေးဆေး ထမင်းစားလို့ရမယ့် အချိန်ပေးပါ။
၇။ သားသမီးတွေကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြဖို့ မရှက်ပါနဲ့
ဖခင်တိုင်းလိုလိုက သမီးတွေကို ချစ်ကြပေမယ့် ချစ်ကြောင်း မဖော်ပြတတ်ကြပါဘူး။ မိခင်လောက် ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမရှိကြတာကြောင့် အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ခပ်တန်းတန်းပဲ ဖြစ်သွားကြပါတယ်၊ မိခင်ထက် ဖခင်ကို ပိုကြောက်ရတာလည်း ပါပါတယ်။ ဒီကြောင့် ဖခင်တွေဟာ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ သားသမီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ နွေးထွေးမှုကို မိခင်လောက် မခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၈။ သမီးကို ချီပိုးပါ
သမီးက အရမ်းငယ်သေးရင် ကျောပိုးထားရတာမျိုး၊ သိုင်းကြိုးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ချီပိုးသွားရတာမျိုးကို မရှက်ပါနဲ့။ ကျွမ်းကျင်သူများက ဒီနည်းလမ်းဟာ ဖခင်တစ်ယောက်နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အကြား ဆက်သွယ်မှုကို ပိုမိုအားကောင်းစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
၉။ သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းကို လက်တွေ့ပြသပါ
ဖခင်တွေကို သားသမီးတွေက လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်၊ သူတို့လေးတွေ ပိုအားကိုးတဲ့သူက သူတို့ဖခင် ဖြစ်လို့ပါ။ ဖခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအကွာအဝေးက အများကြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့လေးတွေ ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတဲ့အခါ လိုက်ပါပေးသလို ၊ စတိုးဆိုင်မှာ အရုပ်လေးတွေ ရွေးချယ်ပေးတာ၊ ပူနေတဲ့အစားအစာကို အေးအောင်မှုတ်ပေးတာ စသဖြင့် ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ပါးစပ်ကထုတ်မပြောဘဲ လက်တွေ့ပြသနိုင်ပါတယ်၊
Next articleကနျြးမာသော ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားဖို့ တဈပတျနဲ့ တဈပတျ ဘယျအစားအစာတှေ စားဖို့လိုအပျသလဲ?